Taratasim-pifandraisan’ny Mpandika : Famoronana Teny, Ny Fomba Fiovàn’ireo Teny Ary Zavatra Hafa Maro ! · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-pifandraisan'ny Mpandika : Famoronana Teny, Ny Fomba Fiovàn'ireo Teny Ary Zavatra Hafa Maro !
Voadika ny 14 Jona 2019 6:13 GMT
Mirary Alatsinainy finaritra ho an'ny tsirairay!
Ary mirary andro iraisam-pirenena ho an'ireo mpandikateny ho an'ny rehetra e [somary tara]! Maniry fotsiny aho ny haka fotoana mba hisaorana ny tsirairay aminareo nohon'ny asa miavaka izay nataonareo ho an'ny tetikasa Lingua eto anatin'ny GV. Ho fanomezam-boninahitra ny fitiavanay anareo sy ny asa fandikàna, ndeha atombontsika ity taratasim-pifandraisana ity amin'ny…
..Izay itiavanay ny Fandikàna!
Pikantsary avy amin'ny blog.oxforddictionaries.com
Ny blaogy Oxford Words niresaka tamin'ireo mpandikateny sivy matihanina ary nangataka azy ireo mba hilaza amintsika izay tiany indrindra mikasika ny asan'izy ireo. Jereo eto ny lahatsoratra ary lazao anay, iza no ampahany ankafizinao indrindra amin'ny asana mpandikateny?
Pikantsary nalaina avy tamin'ny www.npr.org
Fantatsika rehetra fa misy fiteny maro be, saingy ahoana no fomba namoronana azy ireny? David J. Peterson, miresaka amin'ny fiteny valo karazana sy manana diplaoma marobe momba ny fiteny, no afaka milaza aminareo bebe kokoa ao anatin’ity tantaran'ny NPR ity! Namorona fiteny vitsivitsy azy manokana ihany koa aza izy izay ahitàna alfabeta feno, voambolana ary ny fitsipipitenenana.
Ny Fomba Fiovan'ny Teny Arakaraky ny Andehanan'ny Fotoana!
Pikantsary nalaina avy tamin'ny www.ted.com
Raha fantatrareo aho, fantatreo hot toy inona ny fitiavako TED. Vao haingana, najoro-ndry zareo ny lisitra iray lafatra ahitàna ireo velakevitra 6 mikasika ny fivoaran'ireo fiteny ary tena mitondra fampianarana betsaka tokoa, ahitàna ireo lohahevitra miainga avy amin'ireo ‘textos’ mikasika ny fiteny mankany amin'izay asongadin'ireo fahazarantsika amin'ny fitenenana. Topazo maso ary lazao anay izay eritreritrareo!
Ny Hoavin'ny Fiteny
Pikantsary nalaina avy tamin'ny www.washingtonpost.com
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe fiteny inona no ilainareo hianarana mba hahazoana mpihaino betsaka indrindra? Te-hitsidika firenena marobe araka izay tratra ve ianao nefa fiteny tokana no hiresahanao? Namondrona angona maro ny Washington Post mikasika an'ireo fanontaniana ireo sy maro hafa ao anatin'ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “The Future of Language“. Mizotra mankaiza ny fiteny ary fiteny inona no iresahana betsaka indrindra noho ireo hafa? Eo amin'ny rohy eo ambony no hahalalana bebe kokoa!
Mitady: mpandikateny hebreo!
Ry namana, andramanay ny mandefa indray ny vondronay Lingua hebreo ary mila mpandikateny amin'ny fiteny hebreo mahafinaritra izahay! Raha mahafantatra olona ianareo ka mety ho liana hanjohy ny ekipa tsaranay sy hifanome tanana, aza misalasala mandefa amin'izy ireo an’ity taratasy firotsahana ho mpandray anjara ity!
Tahaka ny mahazatra, misaotra anareo rehetra noho ny asa mafy ataonareo sy ny fahafoizan-tenanareo ho an'ny GV!